Dabageed “Lama aqbali doono Maamul aan aheyn Hirshabeelle, cid carqaladeyn karta ma jirto” | HEEGAN
Dabageed “Lama aqbali doono Maamul aan aheyn Hirshabeelle, cid carqaladeyn karta ma jirto”
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa sheegay inuu taageersan yahay doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Hirshabeelle ee shalay lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in dhismaha maamulka Hirshabeelle ee hoggaankiisa lagu doortay magaalada Jowhar inay tahay guul u soo hoyatay dadka ku nool labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
“Jowhar wax fiican ayaa ka dhacday doorasho cadaalad ah ayaa ka dhacday, maamulkaas inuu dhismo waqti dheer la sugayay, markii horena la iskuma diidaneyn Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, la isku dari maayo, maamulkaan waa wax dadka ka dhaxeeya, waana guul u soo hoyatay shacabka labada gobol”ayuu yiri Yuusuf Dabageed.
Waxaa uu sheegay in aanan aqbali doonin in la carqaladeeyo maamulkaas, isla markaana maamul aan aheyn kan Hirshabeelle aanu ka howl geli doonin Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, sida uu yiri.
“Lama aqbali doono maamul aan aheyn Hirshabeelle, lamana sameyn doono maamul carqaladeeya, wixii khilaaf ee jira waxay u taalaa dowladda, ayaga la xaajoonaya cidii dhaliil qabta”ayuu yiri Yuusuf Dabageed.
Madaxweynaha la doortay ee Maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo ka soo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa waxay isku heyb yihiin Guddoomiye Yuusuf Dabageed, waana tan keentay inuu aqbalo doorashada hoggaanka maamulka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa dhowaan ka soo horjeestay shirka Jowhar, waxaana dad badan layaabeen sida mar kale uu hadana mowqifkiisa u bedelay, markii uu kala eryay siyaasiyiin doonayay inay maamul kaga dhawaaqaan magaalada Beledweyn.